२ दिन देखि हरिबंशसँग साथै रहेका मदन कृष्णले पनि गराए टेस्ट, आयो यस्तो रिपोर्ट! – PathivaraOnline
Home > समाचार > २ दिन देखि हरिबंशसँग साथै रहेका मदन कृष्णले पनि गराए टेस्ट, आयो यस्तो रिपोर्ट!
admin October 9, 2020 समाचार, स्वास्थ्य	0
काठमाडौ । नेपालकै चर्चित हाँस्य कलाकार हरिबंश आचार्य र उनको पत्नी रमिलालाई कोरोना पुष्टि भएको छ । हरिबंशसंगै रहेका मदनकृष्णले पनि कोरोना परिक्षण गराएका छन् । उनले आफु हरिबंशसंगै प्रशंग उठाउँदै कोरोना परिक्षण गराएको कुरा खुलाएका छन् । उनको कोरोना रिपोर्ट भने नगेटिभ आएको जनाएका छन् । फेसवुकमा लामो स्टाटस लेख्दै मदनकृष्णले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले लेखेको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै ।
हरिबंशले फोन गरेर “ दाइ, रमिला र मेरो पिसिआर टेष्ट गराएको, रिपोर्टमा त दुबैजनालाई कोरोना पोजिटिभ पो देखायो त” भन्दा म एकछिन त झसंग भएँ किनभने दुइ दिन बिहान देखि बेलुका सम्म एउटा शुटिङ्गमा व्यस्त भएका थियौ। फेरी एउटै गाडी चढेका थियौं । त्यस माथि आफु पार्किन्सन, प्रेसर, प्रोस्टेटको चार पाँच थरी औसधी खाइराखेको मान्छे।
हुन त मलाई केहि हुदैन भन्ने कुरामा ढुक्कै थिएँ तैपनि पनि क्या हो क्या हो , के भन्न सकिन्छ र। “ह” लाई समाते पछि “म” लाई मात्र के बाकी राख्ला र , समात्यो होला बजियाले भन्या जस्तो गरि मेरो पालो चुपचाप घरैमा आइसोलेट भएर बसें। आज बिहानै बि एण्ड बि अस्पतालबाट डाक्टर निरज वैद्धले ले पिसिआर टेस्ट गर्न एकजना मान्छे पठाइदिनु भएको थियो ।
अहिले भर्खर बि एण्ड बि बाटै डाक्टर रिना वैद्धले फोन गरेर “तपाइको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिम आको छ है अङ्कल” भनेर खबर गरिन्। डा रिना बैद्धलाई मैले धन्यबाद दिएं र तुरुन्तै हरीलाई फोन गरेर मेरो पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको कुरा सुनाएँ।
मेरो कुरा सुनेर हरीले भन्यो “ ओहो दाइ , खबर सुनेर मेरो त मनै हलुका भयो , मलाई आफ्नो भन्दा तपाइको बढी चिन्ता लागिरहेको थियो । स्मरण रहोस नेपालमा हरिबंश र मदनकृष्णकाे जोडी बर्षाैंदेखि मह जोडीकाे नाममा चिनिएका छन् ।
महानायककाण्डमा परेपछि नायिका निरुता सिंह पनि विवादमा, दिईन यस्तो स्पष्टीकरण… हेर्नुस्
हेर्दा हेर्दै पोखराको चिप्लेढुंगामा घट्यो यस्तो घटना – भिडियो